ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဟောင်ကောင်ရှိအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအသုံးပြုခြင်း (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည်
J ကိုကလေးမြီးကောင်ပေါက် Gynecol ။ 2013 ဇွန်; 26 (3 ပျော့ပျောင်း): S18-25 ။ Doi: 10.1016 / j.jpag.2013.03.011 ။
ma CM, Shek ၎င်းကို.
အသုံးချလူမှုသိပ္ပံဦးစီးဌာန, အဆိုပါဟောင်ကောင် Polytechnic တက္ကသိုလ်, ဟောင်ကောင်, PR စနစ်တရုတ်။ အီလက်ထရောနစ်လိပ်စာ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် longitudinal အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ဟောင်ကောင်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအရည်အသွေးတွေနှင့်မိသားစု function ကို) ။
ဒီလေ့လာမှုမှာညစ်ညမ်းပစ္စည်းတွေရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စားသုံးမှုကိုလောင်ဂျီတွဒ်အချက်အလက် ၃ လှိုင်းမှာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Wave3၌လေ့လာမှုတွင်ကျောင်း ၂၈ ကျောင်းမှအလယ်တန်း ၁ ကျောင်းသား (၃ တန်း) စုစုပေါင်း ၃,၃၂၅ ယောက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသက်အရွယ် (SD က = .12.6) 74 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
ရလဒ်များအင်တာနက်စားသုံးဘို့အသုံးအများဆုံးအလတ်စားခဲ့ကြောင်းပြသ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ။ ယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးငယ်များကိုပြု၏ထက်ပိုမိုညစ်ညမ်းပစ္စည်းများလောင်လေ၏။ တွေ့ရှိချက်မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအဆိုးအချိန်ကျော်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်များ၏အရည်အချင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အရေးကြီးပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ အစောပိုင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းအပေါ်အလင်းပေးသည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ဟောင်ကောင်ရှိလူငယ်များအဘို့အစားသုံးမှု။
ဃ Duncan က, စိတ်ဓာတ်အစီရင်ခံစာများ, vol "ဟုပုဂ္ဂလိကအရှေ့မြောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားများအတွက်လိင်အချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ် babyish" ။ 68, စစ။ 782-782, 1991 ။
ဃ Duncan ကနှင့် T. Nicholsson "ဟုအရှေ့တောင်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်အချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ," စိတ်ဓာတ်အစီရင်ခံစာများ, vol ။ 68, p ။ 802, 1991 ။
အမ်ဂရစ်ဖစ်၊ “ အင်တာနက်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း - လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း၊ ” Cyberpsychology & Behavior, vol ။ ၃ ။ ထုတ်ဝေသူမှကြည့်ပါ။ 3, pp ။ 4-537, 552. Google Scholar တွင်ကြည့်ရန်၊ Scopus တွင်ကြည့်ရန်
အယ်လ် Trostle "တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်လိင်အချက်အလက်များ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: အချို့တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်," စိတ်ဓာတ်အစီရင်ခံစာများ, vol ။ 72, စစ။ 407-412, 1993 ။
ML Cooper က, PR စနစ်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်နှင့် NL Collins က "နှောင်ကြိုးစတိုင်များ, စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ညှိနှိုင်းမှု," ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, vol ။ 74 မရှိ။ 5, စစ။ 1380-1397, 1998 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
ဂျေ Wolak, K. Mitchell ကများနှင့်ဃ Finkelhor "မလိုချင်တဲ့နှင့်လူငယ်များအင်တာနက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးကအမျိုးသားနမူနာတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းထိတွေ့ချင်ခဲ့တယ်," ကလေးအထူးကု, vol ။ 119 မရှိ။ 2, စစ။ 247-257, 2007 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အမ် Kanuga နှင့် WD Rosenfeld "ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်နှင့်အင်တာနက်: ကောင်းမွန်သောဆိုးများနှင့် URL ကို" ကလေးများ၏ဂျာနယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မီးယပ်, vol ။ 17 မရှိ။ 2, စစ။ 117-124, 2004 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
N. Malamuth နှင့်အီး Impett "ဟုအဆိုပါမီဒီယာအတွက်လိင်အပေါ်သုတေသန: အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုသိလား?" ကလေးများ၏လက်စွဲစာအုပ်နှင့်မီဒီယာ, DG အဆိုတော်နှင့်ဂျေအဆိုတော်, Eds အတွက်စစ 269- ။ ။ 287, Sage, တစ်ထောင်သပိတ်ကာလီဖိုးနီးယား, အမေရိကန်, 2001 ။
အမ် Rich, "လိင်မျက်နှာပြင်: မီဒီယာထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကြပ်အတည်း," ကလေးအထူးကု, vol ။ 116, 1, စစ။ 329-331, 2005 ဖြည့်စွက်။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
CG Svedin, ဗြဲÅkermanနှင့် G. အ Priebe "ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်။ လူဦးရေဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ epidemiological လေ့လာမှု, ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏ "ဂျာနယ်, vol အခြေခံပါတယ်။ 34 မရှိ။ 4, စစ။ 779-788, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ခ Traeen, T. Sorheim-Nielsen နှင့်အေ Beverfjord "သဘောထားနှင့်နော်ဝေလူဦးရေ 2002 အတွက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကို" လိင်သုတေသန, vol ၏ဂျာနယ်။ 41 မရှိ။ 2, စစ။ 193-200, 2004 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
D. Zillmann၊ “ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များလိင်အပေါ်ထားရှိသည့်စိတ်ထားအပေါ် erotica သို့အတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်ခြင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ ” ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်၊ ၂၇ ရက်၊ ထုတ်ဝေသူမှကြည့်ပါ။ Google Scholar တွင်ကြည့်ပါ။ Scopus တွင်ကြည့်ရန်
GM က Hald, "နုပျိုလိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှု," လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, vol ။ 35 မရှိ။ 5, စစ။ 577-585, 2006 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
DTL Shek "မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, ကျောင်းညှိနှိုင်းမှုနှင့်တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု:? တွေ့ရှိချက်တသမတ်တည်းမျိုးစုံလေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံထားပါသည်" ။ စိတ်ပညာသုတေသန SP Shohov, Ed ကအတွက်ကြိုတင်, စစ 163-184, Nova ။ သိပ္ပံ, နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2003 ။
DA Cohen ကို, TA Farley, SN တေလာ, DH မာတင်နှင့် MA Schuster, "ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာမှာလူငယ်များသည်လိင်ရှိသနည်း အလားအလာအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြီးကြပ်မှု၏အခန်းကဏ္ဍ, "ကလေးအထူးကု, vol ။ 110 မရှိ။6။ ဆောင်းပါး e66,6စာမျက်နှာများ, 2002 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
AJ Huebner နှင့် LW Howell, "စောင့်ကြည့်ရေး, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းစတိုင်များ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်သဘောထားအမြင်များအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါ," ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, vol ၏ဂျာနယ်။ 33 မရှိ။ 2, စစ။ 71-78, 2003 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
K. Kiernan "လုံမိခင်, သားသမီးတို့အဘို့အလုပ်အကိုင်နှင့်ရလဒ်," ဥပဒေပေါ်လစီနှင့်မိသားစု၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, vol ။ 10 မရှိ။ 3, စစ။ 233-249, 1996 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်
DA Rosenthal, AMA စမစ်နှင့် R. က de Visser, "ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှာအသက်အရွယ်လွှမ်းမိုးကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လူမှုရေးအကြောင်းရင်းများ," လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, vol ။ 28 မရှိ။ 4, စစ။ 319-333, 1999 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
က MS Weinberg, CJ Williams က, အက်စ် Kleiner နှင့် Y. Irizarry, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ "babyish, ပုံမှန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်," မော်ကွန်း, vol ။ 39 မရှိ။ 6, စစ။ 1389-1401, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
PMA Boislard နှင့်အက်ဖ် Poulin, "တစ်ဦးချင်းစောစောလိင်ဆက်ဆံခြင်း၏မိသားစု, သူငယ်ချင်း-ဆက်စပ်နှင့်ဆက်စပ်ခန့်မှန်း," ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၏ဂျာနယ်, vol ။ 34 မရှိ။ 2, စစ။ 289-300, 2011 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
WA Fisher ကများနှင့်အေဗာရက်, "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း: အင်တာနက်လိင်အပေါ်တစ်ဦးလူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်," လိင်သုတေသန, vol ၏ဂျာနယ်။ 38 မရှိ။ 4, စစ။ 312-323, 2001 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
DTL Shek နှင့် CMS Ma, "ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းပစ္စည်းများစားသုံးမှု: profile များကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု" မသန်စွမ်းသူများနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, vol ။ 11 မရှိ။ 2, 2012 ။
DTL Shek, AMH Siu နှင့် ty Lee က "တရုတ်အပြုသဘောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုစကေး: တစ် validation ကိုလေ့လာမှု," လူမှုရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်, vol အပေါ်သုတေသန။ 12 မရှိ။ 3, စစ။ 380-391, 2007 ။
DTL Shek နှင့် CMS မာရင်းကျိုသည် "ဟုတရုတ်အပြုသဘောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုစကေး၏ Dimensional: confirmatory အချက်လေ့လာဆန်းစစ်" လူမှုရေးအညွှန်းကိန်းသုတေသန, vol ။ 98 မရှိ။ 1, စစ။ 41-59, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
DTL Shek, "တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် functioning မိသားစု၏အကဲဖြတ်: မိသားစုအကဲဖြတ်ကိရိယာ၏တရုတ်ဗားရှင်း," လူမှုရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်, vol အပေါ်သုတေသန။ 12 မရှိ။ 4, စစ။ 502-524, 2002 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
DTL Shek, "တရုတ်ဆယ်ကျော်သက် functioning မိသားစု၏အကဲဖြတ်: တရုတ်မိသားစုအကဲဖြတ်တူရိယာ," ။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး, NN Singh က T. Ollen-ဒစ်နှင့် AN Singh က Eds အပေါ်နိုင်ငံတကာပတ်သ က်. အတွက်စစ 297-316 ။ Elsevier, အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်, 2002 ။
AMH Siu နှင့် DTL Shek "ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်အတွက်တရုတ်မိသားစုအကဲဖြတ်တူရိယာ၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ" ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၏ဂျာနယ်, vol ။ 40 မရှိ။ 160, စစ။ 817-830, 2005 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
DTL Shek နှင့် CMS Ma, "တရုတ်မိသားစုအကဲဖြတ်တူရိယာ (ကို C-FAI): hierarchical confirmatory အချက်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး factorial လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို," လူမှုရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်, vol အပေါ်သုတေသန။ 20 မရှိ။ 1, စစ။ 112-123, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
DK Braun-Courville နှင့်အမ် Rojas "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူမှ Exposure," ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, vol ၏ဂျာနယ်။ 45 မရှိ။ 2, စစ။ 156-162, 2009 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
ဂျေပေတရုနှင့် pm တွင် Valkenburg "ဟု The လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏ antecedents: ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများတစ် longitudinal နှိုင်းယှဉ်," လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, vol ။ 40 မရှိ။ 5, စစ။ 1-11, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အီး Burtney နှင့်အမ် Duffy, လူငယျမြားအများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး: တစ်ဦးချင်း, လူမှုရေးနှင့်ပေါ်လစီ context, Plagrave အေ, Bristol, ဗြိတိန်, 2004 ။
ML Ybarra နှငျ့ KJ Mitchell က "ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှ Exposure: အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း" Cyberpsychology နှင့်အပြုအမူ, vol ။ 8 မရှိ။ 5, စစ။ 473-486, 2005 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
အမ် Janghorbani, TH Lam နှင့်အဆိုပါလူငယ်လိင်လေ့လာမှု Task Force, "ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများအားဖြင့်လိင်မီဒီယာအသုံးပြုမှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ," လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, vol ။ 32 မရှိ။ 6, စစ။ 545-553, 2003 ။
AE Kazdin နှင့် PL Marchiano "ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စိတ်ကျရောဂါ" ကလေးဘဝ Disorders ၏ကုသမှုထဲမှာ EJ mash နှင့် RA Barkley, Eds ။ , စစ။ 211-248, အဆိုပါ Guilford စာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2nd ထုတ်ဝေ, 1998 ။
သမဝါယမ Lam နှင့် DKS ချန်း, "ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့လူပျိုတို့ဖွငျ့ cyberpornography များအသုံးပြုမှု: အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, vol ။ 36 မရှိ။ 4, စစ။ 588-598, 2007 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
RF Catalano, ML Berglund၊ JAM Ryan, HS Lonczak နှင့် JD Hawkins က“ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အပြုသဘောဆောင်သောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - အပြုသဘောဆောင်သောလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်များကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနတွေ့ရှိချက်များ၊ ” ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း၊ 5, 2002 ။
LE Gavin, RF Catalano, C တို့သည်ဒါဝိဒ်-Ferdon, KM Gloppen နှင့် CM Markham "ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ကြောင်းအပြုသဘောဆောင်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု" ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, vol ၏ဂျာနယ်။ 46 မရှိ။ 3, စစ။ S75-S91, 2010 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
PMA Boislard, အက်ဖ် Poulin, ဂျေ Kiesner နှင့်တီဂျေ Dishion "ကနေဒါနဲ့အီတလီမြီးကောင်ပေါက်အကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ် longitudinal စာမေးပွဲ: စဉ်းစားတစ်ဦးချင်း, မိဘနှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ" အပြုအမူဖွံ့ဖြိုးရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, vol ။ 33 မရှိ။ 3, စစ။ 265-276, 2009 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
PJ Dittus နှင့်ဂျေ Jaccard "လိင်နှင့်လိင်ရလဒ်များမှမိခင်-ဆယ်ကျော်သက်ဆက်ဆံရေးမိခင်မရရှိခြင်း၏၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးသဘောထားအမြင်များ၏ဆက်ဆံရေးမျိုး," စိတ်ပညာဌာန, အယ်လ်ဘာနီမှာနယူးယောက်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, 2000 ။
LH စမစ်နှင့် BJ Guthrie "ဟုမော်ဒယ်စမ်းသပ်စဉ်: ဆယ်ကျော်သက်အထီးလိင်တစ်ဦးဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်," ဂျာနယ်ကလေးသူနာပြုအတွက်အထူးကုဘို့, vol ။ 10 မရှိ။ 3, စစ။ 124-138, 2005 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
DM Capaldi, အမ် Stoolmiller, အက်စ် Clark ကများနှင့် ld Owen, "မှာ-အန္တရာယ်ငယ်ရွယ်လူကြီးစောစောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေလူပျိုတို့အတွက်လိင်ကွဲအန္တရာယ်အပြုအမူတွေ: ပျံ့နှံ့, ခန့်မှန်းခြင်း, STD ကျုံ့နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့," Developmental စိတ်ပညာ, vol ။ 38 မရှိ။ 3, စစ။ 394-406, 2002 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
G. အ Wallmyr နှင့် C. Welin, "လူငယ်တွေက, ညစ်ညမ်းနှင့်လိင်: သတင်းရင်းမြစ်နှင့်သဘောထားများ" ကျောင်းသူနာပြုများ၏ဂျာနယ်, vol ။ 22 မရှိ။ 5, စစ။ 290-295, 2006 ။ Scopus မှာကြည့်ရန်
ဂျေပေတရုနှင့် ၀ ီကီဗန်ဘာ့ဂ်၊ “ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ဆိုင်ရာအရလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းပစ္စည်းများနှင့်လိင်အပေါ်အပန်းဖြေမှုသဘောထားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း” Journal of Communication, vol ။ 56 မရှိ။ ထုတ်ဝေသူမှကြည့်ရန်၊ စစ။ ၆၃၉-၆၆၀၊ ၂၀၀၆ ။ Google Scholar တွင်ကြည့်ရန်· Scopus တွင်ကြည့်ရန်
P. ပေါလုသည် Pornified: ဘယ်လိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာ, ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများပြောင်းလဲသည်ဟင်နရီ Holt နှင့်ကုမ္ပဏီများထုတ်ဝေသူများ, နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2005 ။
DTL Shek, CSM Ng သည်နှင့် PF Tsui "ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းအား PATH ၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်: အာရုံစိုက်အုပ်စုများအပေါ်အခြေခံပြီးတွေ့ရှိချက်," မသန်စွမ်းသူများနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, vol ။9မရှိ။ 4, စစ။ 307-313, 2010 ။
DTL Shek နှင့် CMS မာရင်းကျိုသည် "ဟုအဆိုပါအငယ်တန်းအလယ်တန်းကျောင်းနှစ်များတွင်အဆိုပါစီမံကိန်း Path ၏သက်ရောက်မှု: တစ်ဦးချင်းဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကွေးလေ့လာဆန်းစစ်" ဟု The သိပ္ပံကမ္ဘာ့ဖလားဂျာနယ်, vol ။ 11, စစ။ 253-266, 2011 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
DTL Shek နှင့်အယ်လ်ယု, "မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြဿနာအပြုအမူများကာကွယ်တားဆီးရေး: ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့စီမံကိန်း Path ၏ longitudinal သက်ရောက်မှု" ဟု The သိပ္ပံကမ္ဘာ့ဖလားဂျာနယ်, vol ။ 11, စစ။ 546-567, 2011 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်
DTL Shek နှင့် CSM Ng သည်, " သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်များ၏အစောပိုင်းဖော်ထုတ်ခြင်း: ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့စီမံကိန်းလမ်းကြောင်းတစ်ဦးအကဲဖြတ်," မသန်စွမ်းသူများနှင့်လူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, vol ။9မရှိ။ 4, စစ။ 291-299, 2010 ။
DTL Shek နှင့် RCF Sun ကနိုင်ငံတကာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဂျာနယ်, vol "ဟုအဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်၏သဘောထားအမြင်, အပေါ်အခြေခံပြီးစီမံကိန်း Path ၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ် (အလယ်တန်း 1 အစီအစဉ်ကို)" ။ 1 မရှိ။ 3, စစ။ 255-265, 2009 ။
R. Hubbard နှင့် DE Vetter "စာရင်းကိုင်, ဘောဂဗေဒ, ဘဏ္ဍာရေး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပွားသုတေသနတစ်ခုကပင်ကိုယ်မူလနှိုင်းယှဉ်," စီးပွားရေးသုတေသန, vol ၏ဂျာနယ်။ 35 မရှိ။ 2, စစ။ 153-164, 1996 ။ ထုတ်ဝေသူမှာကြည့်ရန်· Google Scholar မှာကြည့်ရန်· Scopus မှာကြည့်ရန်